Iimpawu kunye nebhayoloji yehammerhead shark | Ngeentlanzi
Esinye sezona zilwanyana zibalulekileyo kumanzi olwandle kukrebe. Zininzi iintlobo zookrebe kwihlabathi liphela. Kukho abo bathambekele ngakumbi kwaye bengabungozi kangako kwaye kukho abo banobungozi ebantwini nakwezinye iintlobo zaselwandle ezisondela kuwo. Kule meko, siza kuthetha I-hammerhead ukrebe. Indima yayo njengerhamncwa ibalulekile kuba idlala indima ebalulekileyo kulawulo lwabantu abahlukeneyo kwizinto eziphilayo zaselwandle.
Kule nqaku, uya kufunda yonke into malunga ne-hammerhead shark, ukusuka kwiimpawu zayo eziphambili ukuya kwindlela ezondla ngayo kunye nendlela evelisa ngayo.
2 Umahluko kwezinye iintlanzi
3 Ukuziphatha kunye nendawo yokuhlala
4 Ukondla nokuzala
Le krebe iyaziwa ngamanye amagama aqhelekileyo anjengeempondo ezinkulu. Igama layo lenzululwazi nguSphyrna mokarran. Yeyosapho lakwaSphyrnidae. Phakathi kwezona mpawu zibalulekileyo zale krebe sifumana intloko yayo emile okwe-T. Esi sizathu sokuba le ntlanzi yaziwa ngokuba yi-hammerhead shark. Ukuba sivavanya umzimba opheleleyo walo krebe, siyakuqonda ukuba ubunjwe ngesando. Singatsho ukuba umzimba uphela sisiphatho esisithatha ngayo. Intloko emile okwe-T iphela iyinxalenye yesinyithi esiqhuba ngayo iinzipho.
Le ntloko emile okwe-T ayikuniki kuphela into ebiyimbonakalo eyahlukileyo. Ndiyabulela kolu hlobo lukhethekileyo, Le krebe iyakwazi ukubona nge-360-degree. Njengoko unokuthelekelela, olu hlobo lweempawu luzisa ukuphucuka okukhulu kubuchule bayo bovakalelo kunye neetalente zalo zokuzingela kunye nokusebenza njengomzingeli.
Sisilwanyana esikhulu ngokwaneleyo esinomndilili we-3,5 ukuya kwi-4 yeemitha. Kweminye imimandla, abantu ukuya kwi-6 yeemitha ubude bafumanekile. Oku kwahluka kakhulu ekwakhiweni komzimba, i-ecosystem apho ikhula khona, inani lokutya okufumanekayo, amandla emoto, njl.
Intloko emile okwe-T ikunceda ukuba uphucule umbono wakho kwaye, ngenxa yokuziqhelanisa nayo nolwandle, inokujika umzimba wakho ngokukhawuleza. Isilwanyana esinobukhulu obunjalo, ukutshintsha umkhombandlela kunye nolwalathiso ebusweni bokufuna ixhoba lazo kunzima ngakumbi. Ngenxa yoku, intloko emile okwe-T isebenza ukukhangela iintshukumo zexhoba kwaye iphele iguqula ulwalathiso lwayo kunye nengqondo ngesantya esikhulu.
Umahluko kwezinye iintlanzi
Zizilwanyana ezinomdla ngokwenene. Kuthiwa ukuba Ukrebe omhlophe Yeyona yoyikeka kakhulu neyaziwayo kubo bonke. Nangona kunjalo, i-hammerhead shark inezinto ezithile ezizodwa ezenza ukuba ikhetheke. Banokuphuhliswa kweengqondo ezi-7 kakhulu. Ayipheleli ekubeni babe nezivamvo esizaziyo emntwini, kodwa banezinye ezibini. Enye isetyenziselwa ukwahlula amaza okuhamba ngesantya kunye nenye ukubona indawo yombane eveliswa zezinye iintlanzi. Ezi zivamvo zimbini zintsha ziluncedo kakhulu kubo xa bekhangela kwaye befaka ixhoba. Kulilize ukuzimela ngasemva kwamatye athile, i-hammerhead shark iya kuba nakho ukuzibona ngezi zivamvo zimbini ziphucukileyo.
Umlomo walesi silwanyana ubekwe emazantsi entloko. Umlomo wayo awukho mkhulu ngokwaneleyo ukuba ungabamba ixhoba elikhulu, kodwa ewe inamazinyo abukhali ngokungathethekiyo ukukrazula ngcono. Enkosi kumazinyo abukhali inenqanaba lokubambisa elinamathuba aphezulu okuphumelela.
Ngokubhekisele kumbala, ungwevu okhanyayo ukuya kuluhlaza kwaye oku kuvumela ukuba ubhideke emazantsi olwandle ukuze ungabonakali. Icandelo le-ventral likhanya ngombala kunabanye.
Ukuziphatha kunye nendawo yokuhlala
Ngethuba losuku kudla ngokubonakala kubumba amaqela athile ahlukeneyo. Xa bekumaqela amakhulu abahlali bezingela kakhulu kuba bengenako ukuzifihla okanye ukuzifihla. Ukuba iisampulu ezininzi kwaye zinobungakanani obukhulu kangako, kunzima ukungaziwa kwamanye amaxhoba.
Ebusuku lelinye ibali. Kulapho bahlala benamaxesha amahle okuzingela., kuba bahamba bodwa. Ezinye iisampulu zinokuziphatha okuthe kratya kwaye okungenabungozi kunabanye. Ngokwesiqhelo, kuxhomekeke kubungakanani bazo, zininzi okanye azinaburhalarhume. Ookrebe abakhulu behammerhead banolona hlaselo luyingozi kunye noburhabaxa. Ixesha labo lokuphila lihlala lijikeleze iminyaka engama-30 ekhululekile. Eli xesha lokuphila lixhomekeke kwimingcipheko enokuthi ibe nayo xa ibanjwe ngabantu okanye iphathwa ekuthinjweni.
Ngokuphathelele indawo yokuhlala, nangona isengozini yokuphela ngokweenkcukacha ze-IUCN, sinokuyifumana phantse kwihlabathi liphela. Ubuninzi bayo bukhulu ngakumbi kwiindawo ezinamanzi ashushu kwaye aphakathi. Abayikhethi ingqele, zama ukuyiphepha. Indawo yomsebenzi omkhulu yile ikufutshane nonxweme. Ubunzulu bamanzi adada kuwo bungaphantsi kweemitha ezingama-280.
Ngokuqhelekileyo badada emanzini azolileyo. Ngokwendawo, sifumana eyona ndawo inkulu yookrebe kuLwandlekazi lwaseIndiya, kwiiGalapagos Islands naseCosta Rica.
Njengonokrebe abaninzi, sisilwanyana esidla inyama. Ukutya ikakhulu kwenziwa ziintlanzi, iskwidi, iiel, iidonphins, oononkala, iminenke kunye nokutya kwabo okuthandekayo okuyimitha.
Udumo lokuba lirhamncwa elikhulu lufunyenwe ngenxa yokubamba izilwanyana ngokulula. Nangona kunjalo, abatyi bantu kwaye akufuneki ucinge ukuba usengozini xa udibana nenye yazo.
I-hammerhead shark iphefumla ixhoba layo kwaye isebenzisa intloko yayo ukubetha kunye nokwenza buthathaka ixhoba layo.
Ukuba zizilwanyana ezizimeleyo ngakumbi, ukuvelisa kwakhona akwenzeki rhoqo. Luhlobo lwe-viviparous. Iphinda ivelise rhoqo emva kweminyaka emibini ifikelele kwinqanaba lokuzala kwakhona. Inani labaselula lihlala lihluka ngokuxhomekeke kubukhulu besetyhini. Ixesha lokumitha lihlala malunga neenyanga ezili-10.
Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi ungafunda ngakumbi malunga ne-hammerhead shark kunye neempawu zayo eziphambili.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » abanye » I-Hammerhead ukrebe